Knowledge Archives - Page3of 16 - Trading Myanmar Blog | Myanmar Advertising Agency | Ad Portal Blog
ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သုတေသန
Min Thuta | Knowledge | August 23, 2019
လူတစ်ယောက် ကို အဓိက ကျရူံးစေတဲ့ အကြောင်းတရားများဟာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်
ဘဝအတွက်အရေးကြီးတဲ့ မိမိနဲ့သင့်တော်မဲ့ အသက်မွေးမှုလုပ်ငန်း Career ကိုဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲ? မိမိဘဝအတွက် Career ဆိုတာအရွယ်ရောက်သူတိုင်းတွေးကိုတွေးထားမဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင်
Min Thuta | Health, Knowledge | August 11, 2019
တန်ဖိုးရှိတဲ့ အားလပ်ချိန်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
Min Thuta | Knowledge | August 4, 2019
တိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ လူတိုင်းအလုပ်ကိုယ်စီနဲ့အမြဲလှုပ်ရှားရုံးကန်နေရပြီး အားလပ်ချိန်ရဖို့ ရန်အလွန်ပင် ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရခဲလှတဲ့မိမိရဲ့အားလပ်ချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချပြီ းပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖြတ်သန်း နိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်…
Motivation တက်အောင်ဘယ်လိုနေမလဲ ?
Min Thuta | Knowledge | August 3, 2019
တစ်ခါတစ်ရံမှာမိမိရဲ့ စီးပွားရေး ပညာရေး စတာတွေအတွက် ကြိုးစားဖို့စိတ်ပျက်အားလျော့နေတဲ့အခါ မိမိကိုယ်ကိုတွန်းအားပေးပြီးအကောင်းဆုံးကြိုးစားဖို့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေရှိသင့်ပါတယ်။
Min Thuta | Food, Health, Knowledge | July 28, 2019
သင်္ဘောသီး ကိုစားသုံးပေးခြင်းဖြင့်ကိုယ်ခံအားကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ဒီတစ်ခုထဲပဲလာဆိုရင်တော့မဟုတ်ပါဘူး ဘာတွေအတွက်ကောင်းမွန်သေးလဲဆိုရင်တော့…
H1N1 ကို သတိမလွတ်ကြဖို့ ဒီအချက်တွေဂရုစိုက်ပါ
Min Thuta | Health, Knowledge | July 24, 2019
အခုလိုမိုးရာသီရောက်တိုင်း တုပ်ကွေးအန္တရာယ်ကို သတိထားရမှာကတော့ ပုံမှန်သဘောပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ရောဂါတွေကလည်း ပိုပိုများများလာတဲ့ အတွက် ပိုပြီး သတိထားနေလာရပါတယ်။ အခုဆိုရင်လည်း H1N1 virus ကမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း အဖြစ်များနေပါပြီ။ H1N1 virus
သဘာဝကပေးတဲ့ အလှတရား သို့မဟုတ် ပျားရည်
Min Thuta | Health, Knowledge | July 20, 2019
ပျားရည်ကိုအသုံးပြုပြီး အလှအပအတွက်အသုံးချကျရအောင်။ ပျားရည်ဟာအလှအပအတွက်နေရာစုံကနေအသုံးချလို့ရပါတယ်။ ဘယ်လိုနေရာတွေမှာလဲဆိုတော့…
All times are GMT 6.5. The time now is 7:01 am.